TSMC dia mahazo tombony amin'ny Apple | avy amin'ny mac aho
Ony niongotra, tombony azon'ny mpanjono. Izany no teny filamatra tokony ho eo amin'ny rindrina eo amin'ny foiben'ny mpanamboatra chip. TSMC. Miaraka amin'izao tontolo izao mikorontana noho ny tsy fahampian'ny puce, misy mpanjono lehibe sasany, toa an'i TSMC, manaitra volamena.
Ity mpanamboatra processeur ity dia manan-danja toy ny Apple A sy M andiany, dia vao avy namoaka tarehim-barotra vitsivitsy tamin'ny taon-dasa, ary ny marina dia ny isa dia maneho ny tombony mahatalanjona. Heveriko fa hahazo ampahany tsara ho an'ny Krismasy avy any Taiwan ny mpanatanteraka Apple….
Ny mpanamboatra malaza amin'ny processeur TSMC dia namoaka tarehimarika momba ny kaonty ho an'ny taom-bola 2020 ary ny marina dia mahatalanjona izy ireo, raha jerena ny krizy iaretantsika manerana ny planeta noho ny tsy fahampian'ny famatsiana chips sy processeur.
Nilaza ny orinasa fa nitombo ny fidiram-bolany 24,1% tamin'ny 2021 raha oharina tamin'ny taona teo aloha. Ary tadidio fa ny ampahefatry ny vola miditra dia novokarin'ny Apple. Amin'ny fotoana fohy dia tsy isalasalana fa vaovao lehibe izany, saingy mampidi-doza amin'ny fotoana antonony sy maharitra. Ny 25% amin'ny fihodinan'ny TSMC dia entin'ny mpanjifa tokana: Apple.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ankoatra ny tatitra ara-bola toy izany, dia namoaka ihany koa fa nisoratra anarana fitomboana 16,4% tamin'ny vola azo tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taon-dasa. Miaraka amin'ireo isa ireo, ny orinasa dia nampiakatra ny vinavinan'ny fitomboan'ny fidiram-bolany, izay nametraka azy ireo teo anelanelan'ny 15 sy 20 isan-jato.
Ny TSMC dia efa nanomboka ny fitsapana hanombohana famokarana vaovao 3nm processeur, zavatra izay andrasan'i Apple toy ny orana amin'ny volana Mey ho an'ny iPhones, iPads ary Macs an'ny 2023. Tsy isalasalana, ny asa tsara nataon'ny TSMC nandritra ireo taona ireo ho an'ny Apple dia mamokatra izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mahazo vola be ny TSMC noho ny Apple
Microsoft OneDrive izao dia miasa amin'ny M1 Macs